finn မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Flip-flopping Falcon သည် LEGO ၏အွန်လိုင်းစတိုးသို့ပြန်လာသည်။
11 / 11 / 2021 11 / 11 / 2021 ခရစ် Wharfe 119 Views စာ0မှတ်ချက် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2021, Chewbacca, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 2021, ဖင်လန်, ဟန်တစ်ကိုယ်တော်, Lego, Lego Star Wars, Lego VIP တနင်္ဂနွေ, LEGO VIP Weekend ၂၀၂၁, LEGO.com, ထောင်စုနှစ် Falcon, မင်းသမီးလီယာ, rey, စျေးဝယ်, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, UCS, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
အဲဒါဘာလဲ? LEGO Star Wars 75192 Millennium Falcon သည် အွန်လိုင်းတွင် စတော့ရှယ်ယာ ပြန်ရောက်နေပြီလား။ 7,541 ပုဒ်ကို ဘာကြောင့် မပြောတာလဲ။
UCS LEGO ကိုတည်ဆောက်ပါ Star Wars Millennium Falcon သည်ရပ်တန့်စွာရွေ့လျားနေသည်
24 / 09 / 2021 25 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 249 Views စာ 1 မှတ်ချက် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, animation ရဲ့, BB-8, အကြီးမားဆုံး LEGO အစုံ, ကို C-3PO, Chewbacca, ဖင်လန်, ဟန်တစ်ကိုယ်တော်, Lego, မင်းသမီးလီယာ, ဆန်းစစ်ခြင်း, rey, Star Wars, ရွေ့လျားမှုကိုရပ်တန့်, မလှုပ်နဲ့, UCS, UCS 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, UCS ထောင်စုနှစ် Falcon
ဗီဒီယို wizard သည် LEGO ၏ရှည်လျားသောတည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည် Star Wars 75192 Millennium Falcon - လုံးဝ
Lego Star Wars: The Skywalker Saga dev ကဂိမ်းရဲ့စက်ပြင်အသစ်တွေကိုရှင်းပြတယ်
26 / 08 / 2021 26 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 385 Views စာ0မှတ်ချက် ဖင်လန်, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars: Skywalker Saga, rey, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi, Star Wars: Skywalker ၏မြင့်တက်မှု, နောက်ဆုံး Jedi, Skywalker ၏ထ, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
LEGO ဟောင်းတစ် ဦး Star Wars: Skywalker Saga developer သည်ဂိမ်း၏တိုက်ခိုက်ရေးနည်းသစ်များတွင်ရှားပါးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
Lego Star Wars မဂ္ဂဇင်းစာစောင် ၇၄ ကိုမကြာမီရနိုင်သည်
30 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 455 Views စာ 1 မှတ်ချက် ဖင်လန်, မီဒီယာချက်ချင်း, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars မဂ္ဂဇင်း, Sith Trooper ဖြစ်သည်, Star Wars, Star Warsဖြေ
LEGO ၏နောက်ဆုံးထုတ်ပြissueနာ Star Wars မဂ္ဂဇင်းသည်ဗြိတိန်၌လာမည့်အပတ်၌စင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်
နောက်လရဲ့ LEGO Star Wars မဂ္ဂဇင်းတွင်အခမဲ့အသေးအဖွဲနှစ်ခုပါဝင်သည်
05 / 07 / 2021 05 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 346 Views စာ0မှတ်ချက် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, အုတ်ခဲ, ဖင်လန်, မီဒီယာချက်ချင်း, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars မဂ္ဂဇင်း, Sith Trooper ဖြစ်သည်, Star Wars, Star Warsဖြေ, Star Wars: Skywalker ၏မြင့်တက်မှု, အဆိုပါတပ်ဖွဲ့ကိုနှိုးဆျော, Skywalker ၏ထ
တရားဝင် LEGO ၏နောက်ပြissueနာ Star Wars မဂ္ဂဇင်းတွင် The Force မှအခမဲ့ရုပ်ပုံအသေးစားနှစ်ခုပါဝင်သည်
Lego Star Wars 75201 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်ကို AT-ST ပြန်လည်သုံးသပ်
03 / 01 / 2018 21 / 08 / 2020 ရော့ Paton 2752 Views စာ0မှတ်ချက် 75153 ကို AT-ST Walker က, 75201 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်ကို AT-ST, ဗိုလ်ကြီး Phasma, ဖင်လန်, Lego, Lego Star Wars, နှင်းဆီ, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi, နောက်ဆုံး Jedi
၇၅၂၀၁ AT-ST ၏ပထမဆုံးသော LEGO သည်အရာအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသည် Star Wars တစ်ခါတစ်ရံမှာမှားယွင်းတတ်ပြီးအဆိုးဆုံးအစုတစ်ခုဖြစ်လာသည်
Lego Star Wars နောက်ဆုံး Jedi 75201 ပထမအမိန့်ကို AT-ST တွင်တွေ့ရှိ
17 / 12 / 2017 ဂရေဟမ် 1456 Views စာ0မှတ်ချက် 75201 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်ကို AT-ST, AT-ST, BB-8, ဗိုလ်ကြီး Phasma, ဖင်လန်, Lego, Lego Star Wars, နှင်းဆီ, Star Wars, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi
အပေါ်အခြေခံပြီးနောက်ထပ် LEGO အစုံ Star Warsနောက်ဆုံးသောဂျေဒီကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်၊ Lego စတား
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Lego Star Wars ဖင်နစ် vs ဖင်နစ်
15 / 10 / 2017 13 / 10 / 2017 ဂရေဟမ် 1417 Views စာ0မှတ်ချက် အုတ်ပုံ, ဗိုလ်ကြီး Phasma, ဖင်လန်, Lego, Lego Star Wars, Star Wars, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi
ပုံ - Nilsøn Lewi? ski အသစ်အတွက်နောက်တွဲယာဉ် Star Warsဖြေ။ ။ နောက်ဆုံး Jedi ကပရိသတ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုသရုပ်ဖော်ထားတယ်
Star Warsနောက်ဆုံး Jedi နောက်တွဲယာဉ်ပျက်ခြင်းနှင့် LEGO ထင်မြင်ချက်
10 / 10 / 2017 10 / 10 / 2017 ဂရေဟမ် 1447 Views စာ0မှတ်ချက် ဖင်လန်, အထွေထွေ Leia, Kylo Ren, Lego, Lego Star Wars, လုကာ Skywalker, poe Dameron, rey, Rian ဂျွန်ဆင်, Star Wars, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi, နောကျတှဲရထား
များအတွက်ပြဇာတ်နောက်တွဲယာဉ် Star Warsဖြေ - နောက်ဆုံးဂျေဒီပာပရိသတ်တွေဆီကအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ကိုပြသထားတယ်